SAWIRRO: Dowladda Ingiriiska oo Saldhig ciidamada DF lagu tababaro ka furtay Magaalada Baydhabo | Goobsan Media Inc.
Home Somali News SAWIRRO: Dowladda Ingiriiska oo Saldhig ciidamada DF lagu tababaro ka furtay Magaalada...
SAWIRRO: Dowladda Ingiriiska oo Saldhig ciidamada DF lagu tababaro ka furtay Magaalada Baydhabo
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (lafta gareen) ayaa daahfurey xarun loogu talagalay inay tababar ku qaataan ciidanka xooga dalka qeybta 60aad taasi oo ka kooban xafiisyo iyo goobo lagu barto sida wax loo liisho.
Madaxweynaha ayaa gudaha xarunta waxaa kuso dhoweeyey wasiiru dowlaha wasaarada arimaha dibadda dowlada uk u qaabilsan arimaha afrika safiirka dowlada ingriiska u fadhiya Soomaaliya iyo sarakiil kala duwan.
Soo dhoweyn ka dib madaxweynaha koofur galbeed ayaa kormeerey qeybaha ay ka koobantahay xaruntan waxana uu bogaadiyey sarakiisha dowlada uk sida ay marwaliba u garab tagan yiihin sidii dowlada Soomaliyeed ay u heli lahayd Ciidamo tayaysan oo la wareega amniga guud deegaanadda koonfur galbeed.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis lafta gareen ayaa madaxda kala hadlay sidii kaalintooda ku aadan xoreynta gobolada koonfur galbeed uga gaysan lahayeen, sidoo kale lafta gareen ayaa madaxda kala hadlay sidii ay wax uga qaban lahayeen xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira koonfur galbeed.
Madaxda kasocotay dowlada ingiriiska ayaa dhankooda waxa ay sheegen inay wadaan sidii ay usoo saari lahayeen macalimiin Soomaali ah oo tababarta Ciidanka waxaana ay carabka ku adkeeyen in kan uk ahaan ay kaalin weyn ka geysan doonan xoreynta koonfur galbeed Soomaaliya, iyagoona xusay in marwaliba muhiimada kowaad ay siinayaan arrimaha bini-aadanimada.
Aas Qaran oo Muqdisho loogu sameeyay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed.
Taliyaha Nabad-Sugida Fahad Yasin oo la sheegay inuu xiriir la leeyahay Al-Qaacida.
Dr Xaawo Cabdi oo Muqdisho ku geeriyootay